लब्ली डाँडामा प्रहरी पुग्दा यी युवा युवतीको भयो भागाभाग , लकडाउन बेलामा पनि के गर्दै थिए यी युवा युवती ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/लब्ली डाँडामा प्रहरी पुग्दा यी युवा युवतीको भयो भागाभाग , लकडाउन बेलामा पनि के गर्दै थिए यी युवा युवती ? (हेर्नुहोस भिडियो)
पोखरा– पोखरा गत बैशाख २१ गते देखि लकडाउनमा छ । अति आवश्वक बाहेक अन्य सवारी तथा व्यवसाय खुलेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीले लकडाउनलाई अझ कडाई गर्न थालेको छ ।
मानिसहरु घरबाट बिभिन्न बाहना बनाएर बाहिर निस्कन थालेपछि प्रहरीले कडाई गर्न थालेको हो । अझ मानिसहरु मर्निङ तथा इभिनिङ वाकको नाममा बाहिर निस्केपछि पोखराका त्यस्ता ठाउँहरुमा प्रहरीले निगरानी गर्न थालेको छ ।
बिशेषत प्रेम गर्ने जोडिहरु जाने भनेर चिनिएको पोखराको लब्ली डाँडामा प्रहरीले आफ्नो निगरानी बढाएपछि त्यहा रहेका सर्यौ मानिसहरुको भागाभाग भएको थियो ।
बेलुकी पख हावा खाने निहुमा पनि लब्ली डाँडामा धेरैको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउनको बेला भएका यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित पार्न कास्की प्रहरी लागि परेको छ ।
सन् २०१७ मा एनिमेशन फर्म को समेत काम शुरु गरे । आज मेरो साथमा ६५ जनाले काम गर्छन । वार्षिक टर्नओभर मात्रै ४० करोड बढी हुने गरेको छ ।